युवतीहरुमा किन हुन्छ अनियमित महिनावारी ? सुरक्षित कसरी रहने, थाहा पाउनुहोस् ! « Onlinetvnepal.com
युवतीहरुमा किन हुन्छ अनियमित महिनावारी ? सुरक्षित कसरी रहने, थाहा पाउनुहोस् !
Published : 11 February, 2019 11:10 am
सामान्य अवस्थाको महिनावारी २१ देखि ३५ दिनको बीचमा हुने गर्दछ। नियमित महिनावारी अरु बेलाभन्दा अगाडि पछाडि हुने, अत्यधिक रक्तस्राव हुने भएमा महिनावारी गडबडी भन्‍न सकिने स्त्रीरोग विषेशज्ञहरु बताउँछन्।
परिवार कल्याण महाशखा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी डा।पुण्य पौडेल भन्छिन्। महिनावारी गडबढी हुनुको प्रमुख कारण भनेकै हर्मोन असन्तुलन पनि एक हो।
आजभोलि युवतीमा प्रायस् पोलिसिस्टक हर्मोन बढेका कारण महिनावारी गडबडीको समस्या हुने गरेको छ। पोलिसिस्टिक ओभरियन समस्या हुदाँ महिलाको अन्डाशयका अन्डा पाक्ने र फुट्ने हुन्छ।
महिनावारी गडबडी हुँदा डन्डीफोर आउने, मोटाउने, बच्चा नबस्ने, ढिला बस्ने, समस्या देखा पर्छन्। यो समस्या कसैकसैलाई वंशाणुगत कारणले पनि हुन सक्छ।कसैलाई पाठेघरको रोग फाइब्रोइडरपोलिप पाठेघरमा पानीको फोक्का र कसैलाई रगत नजम्ने समस्याले पनि गडबडी हुन सक्छ।
गर्भनिरोधक चक्की खाँदा चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर मात्र खानुपर्छ।